Maqaalka Ash Munshi ee Martech Zone
Maqaallada by Ash Munshi
Kahor intaanu ku biirin Pepperdata, Ash wuxuu ahaa gudoomiyaha fulinta ee Marianas Labs, oo ah waxbarasho bilow ah oo qotodheer oo la iibiyay bishii Diseembar 2015. Intaas ka hor, wuxuu maamule guud u ahaa Graphite Systems, oo ah bilow weyn oo keydinta xogta ah oo laga iibiyey EMC DSSD bishii Ogos 2015. Ash ayaa waliba u adeegay sida CTO ee Yahoo, oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, waxayna ku jirtaa guddiga dhowr tikniyoolajiyadeed oo bilow ah. Ash wuxuu kaqeyb galay jaamacadaha Harvard, Brown University, iyo Stanford University.
Khamiista, Sebtember 17, 2020 Khamiista, Sebtember 17, 2020 Ash Munshi
Marka si sax ah looga faa'iideysto, xogta weyn waxay awood u yeelan kartaa howlaha. Xog badan ayaa hada door muhiim ah ka ciyaareysa wax walba laga soo bilaabo bangiyada ilaa daryeelka caafimaadka ilaa dowlada. Saadaasha kobcitaanka ee suuqyada xogta weyn ee adduunka, laga bilaabo $ 138.9 bilyan sannadka 2020 illaa $ 229.4 bilyan sannadka 2025, waa tilmaan cad oo ah in xogta weyn ay hadda tahay mid joogto ah oo ka jirta muuqaalka ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, si loo soo saaro qiimaha ugu badan ee xogtaada weyn, xogtaada weyn ee xogta ayaa u baahan